संगीत संयोजनको आरोहमा आमोस : नेपालचर्च डट कम NepalChurch.com
संगीत संयोजनको आरोहमा आमोस
[0] December 17, 2015	| Jagadish Pokhrel
काठमाडौं–धेरै विषयमा हामी परनिर्भर भएपनि अचेल नेपाली संगीत बजार भने आत्मनिर्भर छ । अचेल कुनै फिल्मी गीतको रेकर्डीङका लागि मुम्बई गइरहन पर्दैन । पाश्र्व गायनका लागि भारतीय गायक/गायिकाको खाँचो पर्दैन । किनकि स्वदेशमै एक से एक स्टुडियो, एक से एक सँगीतकार, गीतकार, गायक/गायिका र सँगीत संयोजक (एरेन्जर)हरू छन् । नेपाली संगीतमा यतिबेला पैसा खासै नहोला, तर प्रविधि र प्रतिभाको कुनै कमी छैन ।
पछिल्लो कालखण्डमा समृद्ध बन्दै गएको नेपाली संगीत बजारमा स्थापित प्रतिभा हुन्, आमोस तामाङ । यति चाँडो सफलताको शिखर चुमिएला भनेर सायद संगीत संयोजक आमोस तामाङले सोचेका पनि थिएनन् । एउटै क्षेत्रमा निरन्तर लागिरहँदा आखिर स्थापित भएरै छाडिदो रहेछ भनेर आज आएर आमोसले साबित गरेर देखाइदिएका छन् । केही बर्ष यता नेपालका केही सीमित राम्रा संगीत संयोजकको नाम लिनुपर्दा सँगीतकर्मीहरू आमोस तामाङको पनि नाम लिन्छन् । नाम लिने मात्र हैन, उनलाई काम पनि दिन्छन् । नाम र काम भएपछि दाम स्वतः आउने नै भयो ।
२०४२ साल बैशाख १८ गते गोरखा नगरपालिका–११ मा बुबा याम बहादुर तामाङ र माता जल माया तामाङका कोखबाट जन्मिएका आमोसले गोरखाकै महेन्द्र मा.वि. कुन्दूरटारमा पढे । स्कूल पढ्दादेखि नै उनमा गीत सँगीतको रूची थियो । जिल्ला स्तरीय गायन प्रतियोगितामा प्रायः उनी हरेक पटक प्रथम हुन्थे । उनी तिनताक पप टाइपका गीत गाउँथे । मुलुकमा भर्खर पप गीतको लहर चलिरहेको थियो । भिम तुलाधर, हरिश माथेमा, सँजय श्रेष्ठका गीत खुबै हिट थिए । आमोस भने आपैm पप गीत बनाएर गाउँथे । यसरी कम्पोज र गायनमा उनी सानैदेखि अब्बल रहेको देखिन्छ ।
२०५९ सालमा एस.एल.सी. पास गरेपछि गायक बन्ने सपना बोकेर उनी काठमाडौं आए । उच्च शिक्षा हासिल गर्ने र सँगसँगै गायक पनि बन्ने भन्दै उनले कलानिधि इन्दिरा सँगीत महाविद्यालयमा चौथो वर्षसम्म शास्त्रीय सँगीतको अध्ययन गरे । उनी सँगीतका गुृरुहरू गणेश गुरूङ र धन बहादुर गोपालीका चेला हुन् । सँगीत पढ्दा–पढ्दै उनी केही रेकर्डीङ स्टुडियोहरूमा चार÷पाँच वर्ष रेकर्डीस्ट पनि भए । त्यसै क्रममा उनको भेट भयो, सँगीत सँयोजक महाराज थापासँग । महाराज थापासँगै उनले सँगीत सँयोजनका बारेमा आवश्यक ज्ञान हासिल गरे । करीब तीन वर्षसम्मको तालिम प्रशिक्षणपछि आमोसले व्यवसायिक रूपमै सँगीत सँयोजनको काम थाले । तीन बर्ष यता उनी पूर्ण व्यवसायीक, व्यस्त र भन्नैपर्दा ‘एक मिनट फुर्सद नभएका’ सँगीतकर्मी बन्न पुगेका छन् । रातोपाटीका लागि कुराकानी भइरहँदा पनि उनी सँगीतकार अर्जुन पोखरेलको नयाँ फिल्मको गीतको सँगीत सँयोजनमै व्यस्त थिए । एकातिर काम गर्दै अर्कोतिर कुराकानी गर्दै उनले आफ्नो बारेमा बताएका थिए ।
हो, आमोस अहिलेका व्यस्त सँगीत सँयोजक हुन् । उनीसँग अहिले कामको भ्याइ न भ्याइ छ । उनले हालसम्म अहिलेका जल्दा बल्दा सँगीतकारहरू सुरेश अधिकारी, महेश खड्का, बसन्त सापकोटा, अर्जुन पोखरेल, गैरे सुरेश, सत्य÷स्वरूपराज आचार्य, राजु सिंह, राजनराज शिवाकोटीसम्मका सँगीतकारहरूसँग सहकार्य गरिसकेका छन् । उनले सँगीत सँयोजन गरेका गीतहरू दिनप्रतिदिन हिट भइरहेका छन् । देविका बन्दनाको ‘शुभकामना’ देखि जुनु रिजालको स्वरमा राजनराज शिवाकोटीको सँगीतमा तयार भएको गीत ‘कालो कालो केश मेरो मिठो मिठो बोली’ सम्मका गीत बजारमा आइसकेका छन् ।
हालसम्म ३,०००–३,५०० गीत एरेन्ज गरिसकेका आमोसले करीब दुई दर्जन गीतमा सँगीत भरिसकेका छन् । ‘तीन घुम्ती’, ‘पुनर्जन्म’ लगायत ४० वटा फिल्मका गीतमा सँगीत सँयोजन गरिसकेका आमोससँग अहिले थुप्रै फिल्मका गीत पाइप लाइनमा छन् । महिनामा १५ वटा भन्दा बढी गीतमा सँगीत सँयोजन गर्ने आमोसलाई गीतहरूको चाप बढ्दै गएकाले अहोरात्र काम गर्नु परिरहेको छ । उनलाई नै एरेन्ज गर्न दिइनुको खास कारण चाँहि एक त उनी पप, आधुनिक, फिल्मी सबै खालका गीत उत्तिकै गहन ढंगले एरेन्ज गर्न सक्छन् भने अर्को कारण हो, उनको एरेन्ज एकदम सफा हुन्छ ।
कुनै पनि गीतलाई सुन्दर बनाउन सँगीत सँयोजनको विशेष भूमिका हुने आमोस बताउँछन् । उनी भन्छन्, “गीतलाई सुन्दर बनाउन एरेन्जरको ठुलो भूमिका हुन्छ ।” सँगीत सँयोजनले गीतमा सौन्दर्य र शक्ति भर्ने उनको विश्वास छ ।
आमोस नेपालको क्रिश्चियन समुदायमा पनि उत्तिकै लोकप्रिय छन् । उनले क्रिश्चियन भजन र प्रभु येशू ख्रीष्टका सन्देशहरूले भरिएका थुप्रै गीतहरू गाएका छन् । ‘हे सबै थाकेका’, ‘चौतारीको छायामा’, ‘अल्लारे अल्लारे जोवन’, ‘आज छल्किएका’ लगायतका उनले गाएका क्रिश्चियन भजन निकै चर्चित छन् । यस्ता भजन उनले दुई दर्जन जति गाएका छन् । त्यसैगरी उनले एरेन्ज गरेका क्रिश्चियन भजनहरूमा ‘जब म प्रभुको भएर’ लगायत अरू थुप्रै भजनहरू लोकप्रिय छन् ।
More vacancies in WVI »